Chinese Lemongrass | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Chinese Lemongrass
Ịgbara, kwachaa na ịzụlite mulberries
O doro anya na onye ọ bụla maara ihe mkpụrụ osisi tọrọ ụtọ mulberry na-enye, mana ọtụtụ ndị na-eche na ilekọta ya chọrọ nkà pụrụ iche. Anyị ga-akwụsị akụkọ ifo a, n'ihi na mulberry nwere ike inwe ọganihu nke ọma na mba anyị, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla gbasara ya. Ọnọdụ dị mkpa nke na-eto eto mulberry Ịgha mkpụrụ mulberries ma na-elekọtakwu ha dị nnọọ mfe nke na ndị mmadụ na-akpọ ya "osisi ndị umengwụ."
Otu esi agba Chinese Schizandra
Chinese lemongrass na ọnọdụ ndị dị ndụ bi na China, Korea, Japan, n'ebe ugwu Russia. Osisi a na-etolite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile: larịị, ugwu, n'akụkụ osimiri na iyi. Chinese lemongrass bụ osisi na-abụghị ndị na-adọrọ adọrọ na ọ bụ nke ọma acclimatized na atụmatụ ndị dacha. Obere na iwe, mmeputakwa nke lemongrass osisi Nke a na osisi dị oke eguzogide oyi na oke okpomọkụ, ya mere, mmeputakwa nke lemongrass nwere ike na ugwu ndị dị na ugwu.
Atụmatụ maka ịkụ Chinese lemongrass: esi eto lemongrass si seedlings na osisi
Schizandra Slazandra bụ nke na-adịghị ahụkebe maka ọdịda anyị, ma n'agbanyeghị nke a, ọ na-esiwanye ike na ubi anyị. Lemongrass mara ezigbo mma, ebe ọ na-etolite n'ụdị liana, nke dị mma maka ịkụ ihe na mba ahụ, n'èzí. Chinese lemongrass bụ osisi bara uru nye ụmụ mmadụ, ebe o nwere nnukwu ego malic na citric acid, sugar, citrine, sterols na carotenoids; Mkpụrụ kacha mma nke lemongrass Chinese, nke gụnyere mmanụ ndị dị mkpa, ya mere ịkụ osisi a ga-abụ ụzọ dị mma ọ bụghị nanị iji chọọ ụlọ gị mma, kamakwa iji meziwanye ike gị.
Ndụ hacking maka ubi: esi echekwa carrots na okpuru ulo n'oge oyi na akpa akpa
Nkọwa, ịkụ na ịchekwa apụl apụl
Ihe kachasị mmasị apple apple Bely agbapụtara: nkọwa nke ụdị dị iche iche na atụmatụ ya
Geese ụdị onye nlekọta: atụmatụ nke ozuzu n'ụlọ
Ezigbo mma - Pelargonium tulip. Nkọwa, iche, iwu nlekọta na mmeputakwa
Mmetụta nke ginger na ahụ mmadụ. Ọ dị mma maka imeju na akụkụ anụ ahụ ndị ọzọ?
Ụdị plums dị iche iche. Iwu Nhazi na Nlekọta
Mkpụrụ vaịn dị iche iche "ọchị"